Faraanti gelinta haweenka iyo ragga.
C miisaan CARAT
In ka yar 1 ct
1 illaa 2.99 ct
3 illaa 4.99 ct
5 illaa 6.99 ct
7 illaa 9.99 ct
10 illaa 14.99 ct
15 illaa 19.99 ct
20 illaa 49.99 ct
In kabadan 50 ct
Bisha febraayo dhalashada
Dhalashada bisha Maarso
Dhalashada bisha Luulyo
Dhalasho dhalasho Oktoobar
Dhalashada dhalashada Diisambar
ADEEGA SHAQADA ISKU TASHADA JIMOLOOYINKA ONLINE
Alaabta / $0.00 0
Dhaqanka loogu talagalay in lagu daro waxqabadka ayaa ku kala duwan waqtiga, meesha, iyo dhaqanka. Giraan ka qayb qaadashada ayaa taariikh ahaan aan caadi aheyn, marka hadiyad la siiyay, waxay ahayd mid ka baxsan giraanta arooska.
Nidaamyada wadaagista haweenka
Mudanayaal, maqal. Waxaad ku riyootay maalintaada gaarka ah tan aad aad u yar. Waxaad ku qiyaastay dharkaaga, xaflada, qoob ka ciyaarka ugu horeeya; faahfaahin kasta. Haseyeeshee, weligaa ma joojisay inaad ka fakartid inta ay le'eg tahay qaababka kala duwan ee haweenka ka qeybgalaya?
Maalin qaali ah, dabcan, muhiimadda ugu weyn. Si kastaba ha ahaatee, giraanta waa wax aad xiran doonto maalin kasta inta ka hartay noloshaada iyo sidoo kale waxay u qalantaa inay noqoto mid aad u fiican.
Qalabka waxqabadka ee ragga
Haddii ay haweenku xiran karaan sidkada kaashka si ay u shaaciyaan xaalada, maxaan u dhali karin? Waa hagaag, dhab ahaantii ma jirto sabab. Lammaane badan ayaa doorbida ninkii inuu gashado caddaynta xaaladdooda iyo sida bulshada ay si aad ah u aqbalaan xiriirka aan caadiga ahayn.
Dahab dahab ah, dahab cad, dahab jaalle ah, platinum ama palladium?
Mucaaradlayaasha maantadani waxay heli karaan noocyo kala duwan oo cajiinka ah oo midabyo kala duwan leh. Iyadoo xulashooyinka sida platinum iyo palladium ay noqdaan kuwo caan ah, dahabkuna marwalba waa doorasho fantastik ah. Barashada farqiga u dhaxeeya dahabiga jaallaha iyo kor u kaca dahab iyo garaac dahab caddaan ah ayaa ah hab weyn oo lagu yareeyn karo fursadahaaga markaad go'aan ka gaari kartid birta si aad u dooratid dahabka oo ugu dambeyntii u matala jacaylka noloshaada.
Qalabka waxqabadka aan macquul ahayn
Ha la jabin kharashka. Waxaa jira xulashooyin badan oo la heli karo oo ku saabsan waxqabadka la awoodi karo. Dabcan, macnaha "macquul ah" waa mid sarre. Halka miisaaniyadu ay kala duwanaan karaan, qof kastaa wuxuu leeyahay hal.
Xayeysiinta, xayawaanka, dhoobada, dhoobada ama geedkii cutubka, cutubyada qaababka, muuqaalada iyo muuqaalkuba waa mid aan xad lahayn.
Mid kasta oo ka mid ah afarta C (Carat Weight, Cut, Color, Clarity) waxaa weheliya jaantus dheeman ah oo muujinaya kala duwanaanshaha u dhexeeya darajooyinka. Markaad waxbadan barato ka dib, haddii aad u baahan tahay inaad qof ahaan u aragto dheeman, booqo dukaankaaga qurxinta ee deegaankaaga. Ka hel dareen wanaagsan waxa aad shakhsi ahaan ku qiimeyso dheeman.
Dhaqdhaqaaqa ka qaybqaadashada tartanka ayaa ah xulashada ugu fiican ee muuqaalkan oo kale ah, oo aan yareynin muuqaal ahaaneed oo leh furfurnaan midab iyo qaab. Sidoo kale dhowr ka mid ah alwaaxyada soo jiidashada ah, silsiladaha dhagaxa dhirta waxaa lagu sameeyaa qoryo tayo leh, laga bilaabo emeralds iyo moobiilka safiirada, morganite, opals ... Caadi ahaan waxaa loogu talagalay gabbad sida dhagax dhexe oo markaa ku hareereysan dheeman yaryar ama dhagaxyo aan midab lahayn.
Sanadihii la soo dhaafay waxaa jirey naqshadeeyayaasha firfircoon ee badan, sida Tiffany, Cartier iyo Harry Winston, kuwaas oo magacooda ay isku mid yihiin raaxo iyo dulqaad. Abaal marin dhif iyo naadir u gaar ah oo lala xiriiriyo macaamiisha hodanka ah iyo kuwa caanka ah waxay badanaa bixiyaan farsamoyaqaanada firfircoonida hufnaanta iyo farqiga. Waxaa si weyn loo yaqaanaa dunida dahabka ah ee naqshadeeye iyo magac magaca jaalaha ah sida caadiga ah waa qaali qaali ah.
Naqshadeynta gaarka ah
Naqshadeenu waxay abuuri karaan naqshad gaar ah oo adiga kugu habboon. Iyada oo fursado badan oo kala duwan, waxaad hubaal ka dhigan tahay inaad ka hesho giraanta quruxda badan ee waqtiga aad ku fiican tahay.
USD: Mareykanka (US) dollar ($)
AED: Dirhamka Imaaraatka Carabta (د.إ)
AFN: Afghan afghani (i)
DHAMMAAN: Albaaniyaan lek (L)
AMD: Dheelka Armenian (AMD)
ANG: Holand Antillean guilder (ƒ)
ARS: peso Argentine ah ($)
AUD: Doolarka Australiya ($)
BAM: Bosnia iyo Herzegovina sumadda la beddeli karo (KM)
BBD: Doolarka Barbadian ($)
BDT: Bangaladesh taka (৳)
BGN: Bulgaria lev (лв.)
BHD: Bahrain dinar (.د.د)
BMD: Doolarka Bermudian ($)
BND: Doolarka Brunei ($)
BRL: Reer Brazil dhab ah (R $)
BSD: Doolarka Bahamian ($)
BTC: Seeraar (฿)
BYN: Belarusiyaanka ruble (Br)
BZD: Doolarka Belize ($)
CAD: Doolarka Kanada (C $)
CDF: Kongo Kongo (Fr)
CLP: Chile peso ($)
CNY: Shiinaha yuan (¥)
Koob: peso reer Colombia ($)
CRC: col Costa Rica (₡)
CUC: peso beddeli kara Cuba ($)
CVE: Kebfeerd escudo ($)
DJF: Jabuuti franc (Fr)
DKK: krone deenish ah (DKK)
DZD: Diinaar Aljeeriya (د.ج)
EGP: Miisaanka Masar (EGP)
ETB: lacagta Ethiopia (Br)
FJD: Doolar Fijian ($)
Iibiyey: Pound sterling (£)
GYD: Doolarka Guyanese ($)
HKD: Doolarka Hong Kong ($)
HUF: Hangari forint (Ft)
IDR: Rupiah Indonesian (Rp)
ILS: Lacagta cusub ee Israa'iil (₪)
INR: rupee Indian (₹)
IQD: Diinaarka Ciraaq (ع.د)
JEP: Jinsiga Jarmalka (£)
JMD: Dollarka Jamaica ($)
JOD: Diinaar Urdun ah (د.ا)
KES: shilinka Kenya (KSh)
KHR: Riel Kamboodiya (៛)
KPW: Kuuriyada Waqooyi ayaa guuleysatay (₩)
KRW: Kuuriyada Koonfureed ayaa guuleysatay (₩)
KWD: Diinaari Kuwaiti (د.ك)
KYD: Doolarka Jasiiradaha Cayman ($)
LBP: Lacagta Lubnaan (ل.ل)
LKR: qoondayn Sri Lanka (රු)
LRD: Doolarka Liberia ($)
LYD: Diinaar Liibiya ah (ل.د)
MADAX: dirhamka Morocco (د.م.)
MKD: Diinaar Macedonia ah (ден)
MXN: Mexico peso ($)
MZN: metrik (MT)
NAD: Doolarka Namibiya (N $)
NOK: Boqorka Noorway (kr)
NZD: Doolarka New Zealand ($)
OMR: Cumaan rial (ر.ع.)
PAB: Balboa Panamaniin ah (B /.)
PHP: Filibiin peso (₱)
PLN: Polish zishoty (zł)
RSD: Diinaar Serbian ah (рсд)
Xoqin: Ruush ruush (₽)
SAR: Sucuudiga riyaal (ر.س)
SBD: Doolarka Solomon Islands ($)
SDG: Lacagta Suudaan (ج.س.)
SGD: Doolarka Singapore ($)
SLL: Sierra leonon leone (Le)
SOS: Lacagta shilin Soomaaliga (Sh)
SRD: Doolarka Surinamese ($)
SYP: Lacagta Suuriya (ل.س)
TMT: Hilibka Turkmenistan (m)
TND: Diinaar Tuniisiya (د.ت)
DUWAN: Tongan paʻanga (T $)
ISKU DAY: Liiraha Turkiga (₺)
TTD: Trinidad iyo Tobago dollar ($)
TWD: Doolarka Cusub ee Taiwan (NT $)
TZS: Shilinka Tansaaniya (Sh)
UAH: Yukreeniyaan hryvnia (₴)
UGX: Shilinka Ugaandha (UGX)
UYU: reer Uruguay peso ($)
VEF: Venezuela bolívar (Bs F)
VND: Fiyatnaamiis đồng (₫)
XAF: Bartamaha Afrika CFA franc (CFA)
XCD: Doolarka Bariga Caribbean ($)
XOF: Galbeedka Afrika CFA franc (CFA)
YER: Yemen rial (﷼)
ZAR: Koonfur Afrika rand (R)
Username ama email address *
Waxaan rabaa inaan helo akhbaar kusaabsan waxyaabaha iyo xayeysiinta.